Muxuu Sergio Agüero ka yiri kaddib markii uu ku biiray kooxda Barcelona? – Gool FM
Muxuu Sergio Agüero ka yiri kaddib markii uu ku biiray kooxda Barcelona?
Dajiye May 31, 2021
(Barcelona) 31 Maajo 2021. Weeraryahanka reer Argantina ee Sergio Agüero ayaa muujiyey sida uu ugu faraxsan yahay ku biiristiisa kooxda Barcelona, isagoo muujiyey inuu doonayo inuu ka caawiyo kooxda inay ku guuleysato koobab.
Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa dhammaystirtay saxiixa Weeraryahankii Manchester City ee Sergio Agüero sida ay goordhow shaacisay.
Barcelona iyo Sergio ‘Kun’ Agüero ayaa wada gaaray heshiis ah in ciyaaryahanku kooxda reer Spain ku soo biiro 01-da bisha July, markaasoo uu dhacayo heshiiskiisa kooxda reer England ee Manchester City.
Ciyaaryahanka ayaa saxiixi doona heshiis ku eg dhammaadka xilli ciyaareedka 2022/23 iyo in qandaraaskiisa lagu burburin karo adduun dhan 100 milyan oo euro.
Haddaba Sergio Agüero ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada rasmiga ahee kooxda Barcelona, ayaa wuxuu ku sheegay:
“Runtii Barcelona waa kooxda ugu fiican adduunka, waxaan qabaa inaan qaatay go’aan sax ah oo aan ku imid Barca.”
“Waa talaabo cusub oo mustaqbalkeyga ciyaareed ah, waxaana rajeynayaa inaan ka caawiyo kooxda inay horumar sameyso xilli ciyaareedka soo socda.”
“Ka ciyaarista Barcelona waa talaabo horumar leh ee ku aadan mustaqbalkeyga ciyaareed, waan faraxsanahay waxaana rajeynayaa inaan ka caawiyo kooxda ku guuleysiga koobab.”
“Wax badan ayaa is badalay, markii aan imid Yurub, waxaan ku ciyaaray maaliyada Atletico Madrid, waxaan ahaa 18 sano jir, intaas kaddib waxaan u wareegay kooxda Manchester City ee horyaalka Premier League, maantana waxaan joogaa Barcelona.”
”Dabcan, qaab ciyaareedkayga wuu is badalay, laakiin waxa aan leeyahay khibrado iga dhigaya in aan ka ciyaaro Barcelona, oo aan caawiyo asxaabteyda kooxda.”
“Waxaan salaam weyn u diyaraa taageerayaasha Barcelona oo dhan, waxaana u balan qaadayaa inaan sameyn doono inta karaankeyga ah, waxaana rajeynayaa inay taageerayaashu ku raaxeysan doonaan qaabkeyga kubadda cagta.”
RASMI: Xiddig u ciyaara Inter Milan oo laga helay Korona Fayras